PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - IDowns izibekisele indawo kwiCAF okwesine
IDowns izibekisele indawo kwiCAF okwesine
Isolezwe - 2018-04-16 - EZEMIDLALO - ZAKHELE XABA
ISUNDOWNS ibe yiqembu lokuqala kwiPremier Soccer League ukuzibekisela indawo kwiCAF Champions League kane emuva kokwehlula iBidvest Wits ngo 2-0 emdlalweni we-Absa Premiership obuseLoftus Stadium, ePitoli, ngempelasonto.
Amagoli eSundowns, avule igebe lamaphuzu ayisithupha phakathi kwayo ne-Orlando Pirates embangweni weligi, ashaywe nguThemba Zwane noSibusiso Vilakazi esiwombeni sokuqala.
UMosimane uthe ukungena kwiChampions League yangonyaka ozayo ngeminye yemibandela abebezibekele yona kule sizini. Iqembu selidlale kathathu kulo mqhudelwano liholwa nguMosimane. Liwunqobile ngo-2016, laphuma kuma-quarterfinal ngo-2017, kulokhu selidlala kweyamaqoqo.
ISundowns noma ingaphazanyiswa yiPirates ekuwineni iligi kodwa ingaqeda endaweni yesibili, ithole indawo kwiChampions League.
“Le wini ibikade ibaluleke kakhulu kithina. Inkulu kimina naseqenjini ngoba isinika ithuba lokuyodlala kwiChampions League okwesine kulandelana. Kuyinto enkulu futhi yilowo umbandela ebesinawo futhi sesiwufezile. Ngaphandle kwalokho isinika ukuzethemba kwi-log ukuthi siqhubeke nethuba lokudonsa umoya. Bekukade kuwumdlalo obalulekile ukuthi sithole intuba yokuphefumula,” kusho uMosimane.
“Kodwa ngokwezibalo igebe lisengancipha. Ngiyabona abantu bayabhiyoza kodwa thina baqeqeshi kufanele sehlise umoya. Iligi ayikacaci okwamanje. Ngokwezibalo sidinga amaphuzu ayisikhombisa. Sithemba ukuthi iligi ingacaca ingakapheli imidlalo, kungaba mnandi ukufaka ingcindezi kwiPirates ngoba yenza okufanayo iphefumulela entanyeni yethu. Izinga lebhola liyafana neleJuventus neNapoli.”
ISundowns izothola ithuba lokuphinde icindeze iPirates uma isibhekene neLamontville Golden Arrows emdlalweni weligi eLoftus kusasa ngo-7.30 ebusuku. Ngesizini edlule iSundowns iphunyukwe yiligi emidlalweni yokugcina, isicoco sagcina sithathwe yiWits.
“Ngesizini edlule ngalesi sikhathi besidlala ngokulingana. Emidlalweni eyisithupha sidlale ngokulingana kwemine, sawina emibili. Asikwazanga ukuwina iligi ngokuwina imidlalo emibili. Namuhla kwenzeke okuhlu kakhulu. Ngiyakuthanda okushiwo ngabadlali bami. Bathi sifundile ngamaphutha anyekenye, ngeke siwaphinde,” kusho uMosimane.
“Umdlalo wethu ne-Arrows usondele kakhulu. Angiwuthandi lo mdlalo. UThapelo (Morena), Villa (Sibusiso Vilakazi) noKhama (Billiat) balimele.Uyabona ukuthi kwenzekani. Kufanele senze noma yini ukuze siwine. Akukho ukudlala ibhola elihle, lokho sizokubona ngonyaka ozayo.”
UBONGI Ntuli wePlatinum Stars evinjwa wuPhilani Zulu weKaizer Chiefs emdlalweni we-Absa Premiership eFNB Stadium izolo ntambama
UTHEMBA Zwane noSibusiso Vikalazi okuyibona abashaye amagoli ngesikhathi iMamelodi Sundowns ihlula iBidvest Wits kowe-Absa Premiership eLoftus Stadium ngempelasonto